मालेपाटनमा दुर्घटनामा परेकी रिताको मृत्यु — donnews.com
'टिपरले पोखरा–१७ विरौटाकी केसीलाई पैदल हिडिरहेको अवस्थामा ठक्कर दिएको थियो'
पोखरा । टिपरको ठक्करले घाईते भएकी एक पैदल यात्रीको उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको छ । हिजो २४ गते विहान साढे सात बजे पोखरा वडा नं. ५ स्थित गणतन्त्र चोकमा टिपरले पैदल यात्री रिता केसीलाई ठक्कर दिएको थियो ।
ग १ ख ९७०३ नम्बरको टिपरले ठक्कर दिदाँ घाईते भएकी स्याङ्जा बिरुवा गाउँपालिका वडा नं. ४ घर भई हाल पोखरा वडा नं. १७ विरौटा बस्ने वर्ष ४० कि केसीको उपचारका क्रममा आज विहान ६ः३० बजे मृत्यु भएको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराले जानकारी दिएको छ ।